Abavelisi be-On-Grid Inverters-i-China i-On-Grid Inverters Factory & Suppliers
Inqanaba lesithathu, i-MPPT ye-2
I-RENAC Pro series inverter yenzelwe ngokukodwa iiprojekthi zokuhlala kunye neeprojekthi ezincinci zorhwebo.Ngoyilo lwayo oludibeneyo, i-inverter ilula kwaye kulula ukuyifaka.Obona buchule buphezulu bungama-98.5%.Ngenkqubo yokungenisa umoya ephuculweyo, i-inverter iyakwazi ukutshabalalisa ubushushu ngokufanelekileyo.
I-RENAC R1 Macro Series yi-inverter yenqanaba elinye kwigridi enobungakanani obugqwesileyo obubambeneyo, isoftware ebanzi kunye nobuchwepheshe behardware.I-R1 Macro Series inikezela ngokusebenza okuphezulu kunye neklasi ekhokelayo esebenzayo-ngaphantsi, uyilo oluphantsi lwengxolo.
I-Renac R3 Max Series 120-150 kW inverter yesigaba sesithathu somtya yamkele i-10/12 yoyilo lweMPPT ukubonelela ngeskim soqwalaselo olubhetyebhetye.Igalelo eliphezulu langoku lomtya ngamnye lifikelela kwi-13A, enokuthi ilungiswe ngokugqibeleleyo kwimodyuli yamandla aphezulu ukunyusa ukuveliswa kwamandla.
Ulungelelwaniso lunokwenziwa lula ngeBluetooth.Umsebenzi we-Smart IV Curve, Umsebenzi weSVG wasebusuku, ukwenza i-O&M ibe lula.
I-RENAC R3 Plus Series inverter ilungele iiprojekthi zorhwebo eziphakathi ukuya kwezinkulu, ngakumbi kuphahla lwentengiso olukhulu kunye nezityalo zasefama.Uluhlu lusebenzisa i-topology ephezulu kunye neteknoloji yokulawula iteknoloji ukuphumeza ukusebenza kakuhle kwe-99.0% kunye nembuyekezo ephezulu yexesha elide kunye nenzuzo kubanini beeprojekthi.
I-inverter ye-R3 Pre series yenzelwe ngokukhethekileyo izigaba ezithathu zokuhlala kunye neeprojekthi ezincinci zorhwebo.Ngoyilo lwayo oluhlangeneyo, i-R3 Pre series inverter ilula ngama-40% kunesizukulwana sangaphambili.Ukuphumelela kokuguqulwa okuphezulu kunokufikelela kwi-98.5%.Igalelo eliphezulu langoku lomtya ngamnye lifikelela kwi-13A, enokuthi ilungiswe ngokugqibeleleyo kwimodyuli yamandla aphezulu ukunyusa ukuveliswa kwamandla.
I-RENAC R3 LV Series inverter yesigaba sesithathu iyilwe ngegalelo lamandla ombane aphantsi kwezicelo ezincinci zePV zorhwebo.Iphuhliswe njengokhetho olukhethwayo kwimfuno yemarike yaseMzantsi Melika kwii-inverters ezinevoltage ephantsi ngaphezulu kwe-10kW, iyasebenza kuluhlu lwamandla ombane othungelwano lwegridi kummandla, olugubungela ikakhulu i-208V, 220V kunye ne-240V.Nge-R3 LV series inverter, ubumbeko lwenkqubo lunokwenziwa lula endaweni yofakelo lwe-transformer ebiza kakhulu echaphazela kakubi ukusebenza kakuhle koguqulo lwenkqubo.
I-RENAC R3 Note Series inverter yenye yezona zinto zikhethwa kakhulu ezifumanekayo kumacandelo okuhlala kunye nezorhwebo ngamandla ayo obugcisa, okwenza ukuba ibe yenye yezona ziguquli zivelisa kakhulu kwimarike.Ngobuchule obuphezulu be-(98.3%), ukongezwa kobukhulu obunyusiweyo kunye nesakhono sokulayisha ngaphezulu, iR3 Note Series imele ukuphucuka okubalaseleyo kushishino lwe-inverter.
Ii-inverters zeRenac R1 Moto zihlangabezana ngokupheleleyo nemfuno yemarike yeemodeli zokuhlala ezinenqanaba elinye lamandla aphezulu, kwaye zifanelekile kwizindlu zasemaphandleni kunye neendawo zokuhlala zasedolophini ezinophahla olukhulu.Bangafaka endaweni yokufakela ezimbini okanye ngaphezulu amandla aphantsi asezantsi inverter yesigaba esinye.Ngelixa uqinisekisa ingeniso yokuveliswa kwamandla, iindleko zenkqubo zinokuncitshiswa kakhulu.
I-RENAC R1 Mini Series inverters lukhetho olufanelekileyo lweeprojekthi zokuhlala ezinoxinano lwamandla aphezulu, uluhlu olubanzi lwamandla ombane wofakelo olubhetyebhetye ngakumbi kunye nomdlalo ogqibeleleyo wepaneli zePV zamandla aphezulu.
Inverter Off Grid 5kw, IHybrid kwi-Inverter yegridi, Umguquli weGridi omncinci, IHybrid kwi-Inverter yeGridi enoGcino lwaMandla, I-Wind turbine Grid Tie Inverter, I-Hybrid Grid Tie Inverter,